Vaovao - Ny famoronana palitao
Ny famoronana palitao
Marcintos dia teraka tamina fianakaviana Scottish. Tena tia mianatra sy be zotom-po izy tamin'izy mbola kely. Manantena ny ho mpahay siansa izy rehefa lehibe ka mamorona zavatra maro mbola tsy hitany. Na izany aza, vokatry ny fahantrana tao amin'ny fianakaviana dia nianatra tany ivelany izy tamin'ny fahatanorany, trano akaikin'ny orinasa kely hanaovana asan-jaza.
Na dia nandao ny sekoly tiany aza Izy dia tsy nitsahatra nianatra. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra dia matetika izy no mitazona boky ary mianatra tsy an-kijanona eo ambanin'ny jiro solitany.
Tamin'ny 1823, niditra tao amin'ny orinasa iray i Marcintos izay nanamaina. Io no fampiasana fingotra lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Fotoana fohy taorian'ny nidirany tao amin'ny ozinina, dia nianatra ny kanto fanafoanana avy amin'ilay tompony taloha izy. Napetrany tao anaty vilany lehibe ilay fingotra manta ary avy eo nodorany tao ambanin'ilay vilany lehibe. Mandra-pieraky ny fingotra manta dia asio paoka sy afangaro; Farany, narotsaka tao anaty maodely ny vahaolana vita amin'ny fingotra. Amin'izany fomba izany, aorian'ny fampangatsiahana dia mamorona sombin-gaoma izy ireo.
Indray andro, satria efa tara loatra izy namaky ny alina talohan'io, ary satria mahia izy dia nahatsiaro ho kamo teo am-piasana i Marcintos. Ho fitsinjovana ny fianakaviana iray manontolo dia tsy maintsy nanaikitra ny lela izy ary nitaritarika ny vatany reraky ny asany.
Saingy rehefa naka vilany misy vy vita amin'ny vy izy ary nandraraka izany tao amin'ilay maodely, dia solafaka ny faladiany, niondrika izy ary niankohoka. Soa ihany fa nampiorina ny vatany izy, tsy nanelingelina ilay ranon-tsolika ilay tavy, fa ny sasany fotsiny tamin'ny ranon-tsolika nanidina teo alohan'ny lambany.
Niorina mafy i Marcintos ary nanohy ny asany.
Farany dia naneno ny lakolosy tamin'ny faran'ny andro. Nofafan'i Massintos tamin'ny volony ny hatsembohany ary nalemy nalehany nody izy.
Vao nanakaiky ny tranony i Marcintos dia nisy tselatra ary nisy kotrokorana ary nirotsaka ny orana. Nanafaingana ny diany i Marcintos, nefa mbola tototry ny orana.
Rehefa tonga tany an-trano izy, dia nanala haingana ny palitaony i Maacintus. Avy eo hitany fa feno rano ny sisa amin'ny toerana. Mirotsaka ny orana, saingy tsy izany no teo alohany.
“Hafahafa izany. Voasaron'ny rano vita amin'ny fingotra ve ny palitao? ” “Nimonomonona tamin'ny tenany i Marcintos.
Ny ampitson'iny, Nandritra ny fijanonany niasa dia nametaka ranon-tsigara tamin'ny vatany i Marcintos. Rehefa tonga tany an-trano aho dia nesoriko ny akanjoko ary napetrako tamin'ny tany. Avy eo dia naka koveta iray rano aho ary nararaka tamin'ny lamba. Azo antoka fa mbola maina toy ny teo aloha ilay toerana misy ranon-tsolika.
Faly be i Marcintos. Fotoana fohy taorian'izay dia nanao akanjo nopetahany ranon-tsiranoka izy. Tsara ny akanjo raha oharina amin'ny orana, fa rehefa nandeha ny fotoana, dia nibolisatra mora ilay fingotra.
Ahoana ny fomba hihoarana an'io fatiantoka io? Nieritreritra fatratra i Marcintos.
Farany dia tonga tamina hevitra mamirapiratra i Maacintos: norakofany ranon-javatra vita amin'ny fingotra ny sosona lamba avy eo norakofany lamba. Amin'izay dia tsy hikororosy ny fingotra ary tsara tarehy kokoa izany.
Maacintos dia nanao palitao avy amin'ny lamba roa miaraka amin'ny fingotra ao anatiny. Toy izany no nahatonga ny palitao voalohany teto an-tany.
Tamin'ny andro nilatsahan'ny orana dia nandehandeha tamim-pilaminana tao anaty palitao i Marcintos. Nidina avy tao anaty orana ny orana, nilatsaka tamin'ny tany. Izy io no mozika tsara indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny sofin'i Marcintos!
Marcintos dia naniry ny handrenesan'izao tontolo izao ny mozika mahafinaritra. Nahita fampanantenana lehibe tamin'ny famokarana palitao izy. Ka noho izany, manangona vola, ozinina mpamokatra orana voalohany eto an-tany.
Rehefa napetraka teny an-tsena ny palitao dia noraisina tsara izany. Antsoin'ny olona hoe "Marcintos" ihany koa ny akanjo lava. Hatramin'izao. Mbola ampiasaina io teny io.
Mazava ho azy, ny palitao, toy ny vokatra vita amin'ny fingotra hafa tamin'izany fotoana izany dia nisy lesoka tamin'ny tànana miraikitra amin'ny toetr'andro mafana sy tanana mafy amin'ny hatsiaka. Raha tsy vao namorona fingotra vita tamin'ny volon-koditra i gutey tamin'ny taona 1839 dia naharesy an'io olana io izy ary nahatonga ny palitao ho mateza sy ahazoana aina kokoa.